ओलिलाइ प्रश्न-के हतियार त्यागेर नै प्रचण्ड वार्तामा आएका थिए ? – www.agnijwala.com
ओलिलाइ प्रश्न-के हतियार त्यागेर नै प्रचण्ड वार्तामा आएका थिए ?
वार्ताको लागि सरकारले एउटा सर्त पनि राखेको छ – कि वार्ता अघि विप्लवले हतियार विसाउन । के यो शर्त विप्लव पक्षले मान्लान ? माओवादी युद्धताका नै दस बर्षसम्म यस्ता विषयमा प्रशस्त सवालजवाफ नभएका होइनन । तर के त्यतिवेला दिल्लिमा १२ वुदे हुनुअघि नैै माओवादीले हतियार विसाएको थियो ?विप्लवकाे शक्ति हतियार भइसक्याे।सर्पकाे शक्ति विष हाे। र,के विष नभएपछि सर्प रहन्छ ?